iBooks sy PDF mankany iCloud. Ny tsiambaratelon'ny iOS 9.3 | Avy amin'ny mac aho
iBooks sy PDF mankany iCloud. Ny tsiambaratelon'ny iOS 9.3
Applelised | | iOS, About us
Apple dia nampihatra fiasa iray tena lehibe amin'ny fanavaozana vaovao, saingy miafina ity fiasa ity, tsy nisy nambara na nolazaina, fa maninona?
Ilay «Zavatra iray hafa» izay tsy hita izahay
Omaly ny Fanavaozana ny iOS 9.3, izay ahitantsika ny maody Night Shift, ny tenimiafina fanamarihana ary ny fikirana mba hanafarana azy ireo araka ny itiavantsika azy, ny fanatsarana ny bateria sy ny fahombiazanay, sns. Fa ny iray amin'ireo zavatra voalohany hitako dia tsy voatonona anarana, na koa mbola tsy noresahina tany amin'ny betas, na farafaharatsiny tsy nisy nahatsikaritra, ary izany dia: iCloud ho an'ny iBook.
Inona no avelan'ny iCloud ho an'ny iBook? Mamela antsika hanao zavatra TSY afaka io taloha, na dia misy mieritreritra izany aza, ary izany dia ny fitahirizana ireo antontan-taratasy PDF rehetra, epub, iBooks sns ao amin'ny iCloud, mivantana, toy ny. Raha ny marina dia azontsika atao ny mampiditra azy ireo iCloudDrive. Ity dia zavatra tena tsara iray izay tokony ho tonga talohan'izay, ary amin'ny toe-javatra sasany dia te-hamerina ny iPhone na iPad aho ary very ny boky sy ny PDF izay notehiriziko, ary manelingelina izany.
Talohan'ny nitazomana azy ireo tao iCloud fividianana, toy ny amin'ny rindranasa na mozika, izany hoe ny magazay niomerika fa efa nividy azy ianao ary nanolotra anao safidy hisintona azy io indray, saingy tsy afaka mitahiry rakitra sy boky alaina avy amin'ny magazay hafa na tranokala hafa ianao. Izay PDF mety ho very ianao raha tsy nitahiry izany tamin'ny Mac.
Apple mitady fomba hanatsarana sy hanatsarana ny serivisy ao aminy. Samy Apple Music izay hivoaka ary iCloud, izay manolotra tahiry maimaimpoana 5Gb anao ary amin'ny € 1 fotsiny dia manome 50Gb anao izany, safidy iray izay tsy hisalasalako hanakarama raha vantany vao fohy ireo maimaim-poana, amin'izao dia afaka mihazona tsara aho. Mba hanamafisana ny serivisy fitehirizana natombok'izy ireo iCloud Drive ary nampiroboroboany ny fampiasana an'ity fitaovana ity ho an'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo, toa ny Pixelmator
Eo anelanelan'ny zavatra iray sy ny iray hafa, ary ankehitriny miaraka amin'ny fampiharana ny iBooks, hameno ny 5Gb maimaimpoana eo noho eo ry zareo, na dia toa tsy toa ahy aza ireo sary ireo ao anaty rahona, dia hanery anay izy ireo hanakarama drafitra fandoavam-bola, na dia tena mora vidy aza izy ireo, saingy amin'ny mpampiasa maro dia afaka manao izany izy ireo manaova fifanarahana tena tsara.
Farano amin'ny filazanao fa tsy azoko ny antony tsy nanomezan'izy ireo anarana iCloud for iBooks amin'ny famelabelarana. Heveriko fa fiasa lehibe sy mahasoa izay mamporisika anao hahita sy hanandrana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iOS » iBooks sy PDF mankany iCloud. Ny tsiambaratelon'ny iOS 9.3
Sil dia hoy izy:
Salama, nampihariko ity fanavaozana ity izay hevitrao momba ny Ipad 2-ko ary izao dia tsy afaka miditra amin'ireo rakitra pdf sy boky natahorako tao Ibooks, angamba ny tsy fahalalako ny fampiasana rahona na Ibooks, saingy tiako ny hahafantarana raha misy fomba ahafahana miditra indray ny fisie ataoko avy any Ibooks, satria fantatro fa tsy very izy ireo satria manohy ao anaty fikirakirana ao anaty fitehirizana.
Misaotra betsaka mialoha raha afaka mamaly ny fanontaniako ianao.
Mamaly an'i Sil
Adriana dia hoy izy:
Salama Sil, tiako ho fantatra fa ny valin-kafatra novalian'izy ireo tamiko. Tsy afaka miditra amin'ireo fisieoko amin'ny ibooks aho.
Valiny tamin'i Adriana
claribel dia hoy izy:
Salama, zavatra mitovy amiko no nanjo ahy, nanao ny fanavaozana aho ary tsy afaka miditra amin'ny fisie maro intsony, te-hahafantatra ny fomba ahafahako miditra amin'izy ireo indray, fantatro fa tsy very azy ireo aho satria hitako ao anaty tahiry ibook, fa ilaiko izy ireo ary tsy hitako izay hatao, manana boky mihoatra ny 200 aho ao amin'ny pdf.
Azafady raha misy afaka manampy ahy, ahoana no ahafahako mampandeha azy ireo indray?
Mamaly an'i claribel
Juana jordan dia hoy izy:
Nisy zavatra nitovizany tamiko. ireo boky nanjavona dia tao amin'ny iCloud. Tsy mahita azy ireo amin'ny iPad aho fa mahita azy ireo amin'ny solosaiko amin'ny alàlan'ny Windows 10
Mamaly an'i Juana jordan
Nitranga tamiko koa io ary tsy afaka miditra amin'ireo rakitra iBook-ko aho
Alejandra Franco dia hoy izy:
Tsy ny boky ihany no very fa ny antontan-taratasy manan-danja ihany koa ary tsy hitako izay hatao hamerenana azy ireo, manahy aho fa misy manampy ahy azafady
Valiny tamin'i Alejandra Franco
Betsaka koa ireo rakitra PDF nanjavona ho ahy. Tsy azoko io fandidiana io. Tsy ao anaty iCloud ireo rakitra tsy hita.
Nandinika pejy aho ary hitako fa tsy vaovao ity olana ity. Na izany aza tsy afaka nahita vaovao momba ny vahaolana aho, na dia misy aza.
Manantena aho fa hanome valiny ahy ianao
Manana an'io olana io ihany aho ary mila mamerina fisie avy amin'ny iBooks izao.
Misy azafady ve manana vahaolana ???
Ny horonantsary ifotony ho an'ny iPhone SE sy iPad Pro 9,7 "efa misy
Ny tsaho momba ireo MacBook vaovao dia mampitandrina fa ho tonga amin'ny Jona izy ireo